Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey guulaha Soomaaliya ka gaartay deyn-cafinta | Xaysimo
Home War Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey guulaha Soomaaliya ka gaartay deyn-cafinta
Madaxweyne Farmaajo oo bogaadiyey guulaha Soomaaliya ka gaartay deyn-cafinta
Madaxweynaha dowladda federaalka, Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa boggaadiyey guulaha laga gaaray barnaamijka deyn cafinta, kadib markii ay Soomaaliya shalay buuxisay maraxaladii koowaad.
IMF iyo Banka Adduunka ayaa shalay sheegay in Soomaaliya ayaa dhameysay marxaladdii koowaad ee dadaalka ay dooneyso in deynta looga cafiyo, taasi oo loo yaqaan Decision Point, oo macnaheedu yahay inay u qalanto in deynta-laga cafiyo.
Soomaaliya ayaa hadda billaabeysa safarka iyo dadaalka ay ku dooneyso inay ku gaarto marxaladda labaad ee deyn-cafinta oo loo yaqaan Completion Point, taasi oo qaadan kartaa saddex sano, si si-buuxda looga cafiyo deynta ay ku leeyihiin deyn-bixiyayaasha caalamiga ah.
Warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale lagu soo dhoweeyey heerka uu gaaray xiriirka iskaashi ee DF iyo hay’adaha maaliyadeed ee adduunka.
Sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay ka go’an tahay in laga sal gaaro dhameystirka qorshaha deyn cafinta oo xilligaan muhiim u ah Soomaaliya.
Halkaan hoose ka akhriso warsaxaafadeedka: